Nanmalgyi - Page 904 of 934 - News & Entertainment
February 19, 2018 Yuki 0
ုယူအက်စ်သမ္မတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသင်သိပြီးပြီလား? နိုင်ငံတိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှသေချာနှံ့နှံ့စပ်စပ်မသိကြပါဘူး။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအပါအ၀င်ပေါ့။ ၁။Thomas Jefferson ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေရဲ့ တတိယမြောက်သမ္မတဖြစ်တဲ့ Thomas Jefferson ဟာ Declaration of Independence ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တီထွင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့စက်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေများစွာဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်လှည့်စင်နဲ့ပိုလီဂရပ်ကိုလည်းသူတီထွင်ခဲ့ ပါသေးတယ်။Thomas Jefferson ရဲ […]
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း သရုပ်ဆောင် ၀ါရင့်မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်တစ်ယောက် လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားနေရပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်သူက လက်၇ှိမှာတော့ ပြည်ပမှာနေထိုင်ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ဟာ စိတ်တူကိုယ်တူ အနုပညာဝါသနာပါသူတွေဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလုပ်တွေကိုလဲ အဝေးကနေ ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်ပေမယ့် နုပျိုလှပဆဲပါဘဲ။ သူမရဲ့ သားနဲ့ […]
ကမ္ဘာ့အ​ခန့်​ညားဆုံး သွေးစုပ်​ဖုတ်​​ကောင်​ (၁၀) ​​ယောက်​
ကမ္ဘာ့အ​ခန့်​ညားဆုံး သွေးစုပ်​ဖုတ်​​ကောင်​ (၁၀) ​​ယောက်​ မ​ကောင်းဆိုးဝါး​တွေကို အဆင့်​လိုက်​ ခွဲခြားရမယ်​ဆိုရင်​​တော့ ရှင်းပါတယ်။​ ​ရုပ်​ရည်​နှင့်​ အပြုအမူအရ ဖုတ်​​ကောင်​​တွေဟာ ​အောက်​ဆုံးအဆင့်​မှာ ရှိပါတယ်။​ ​နောက်​တစ်​ဆင့်​မှာ သမန်းဝံပု​လွေ​တွေက ရှိ​နေတာ ဖြစ်​ပါတယ်။​ သူတို့က အချိန်​​တော်​​တော်​များများ လူအသွင်ယူထားကြပြီး တစ်​ခါတစ်​​လေ အ​မွှေးထူထူ သွားရည်​တစ်​စက်​စက်​ ကျ​​​နေတဲ့ ​ကြောက်​ရွံ့ဖွယ်​ […]
ဓနုဖြူမြို့နယ်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးကို ဓားနဲ့ထိုးလို့သေဆုံးရပြန်ပြီ
ဓနုဖြူမြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက်(၅၀)အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ဓားထိုးခံရပြီး ဓနုဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၈)ရက်၊ နံနက်(၁)နာရီခန့်က သေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ နေအိမ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၆)လခန့် က ကွဲကွာနေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ထမင်းပေါင်းအိုးလာယူတာကို မပေးရာက […]
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့စရိုက်အမှန်ကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြနေတဲ့ ဆံပင်ပုံစံများ
ဆံပင်စတိုင်ဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်သလို ဒီဆံပင်စတိုင်ကိုရွေးချယ်တဲ့သူရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြနိုင်ပါသေးတယ်။အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းထားတာကြောင့် အားလုံးအတွက် တစ်ထစ်ချမှန်မယ်လို့တော့အာမမခံနိုင်ပေမယ့် ပျော်စရာတစ်ခုအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.Long Hair ဒီလိုဆံရှည်စတိုင်အမျိုးသားတွေဟာ စိတ်ကူးကောင်းသလို ယောင်္ကျားတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာတော်တော်များများ ပိုင်ဆိုင်သူပါ။ 2.Short cuts temples & nap ဒီဆံပင်စတိုင်ကတော့ ယောင်္ကျားဆန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ဆိုရပေမယ့် ဒီလိုဆံပင်စတိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ […]
မြန်မာ့တပ်မတော်တွင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် Kavdrat-M လေကြောင်းပစ်ဒုံးကျဉ်
မြန်မာ့တပ်မတော်တွင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်Kavdrat-Mသည် တာတိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါKavdrat-M၏အောက်ခံယာဉ်အဖြစ် MZKT-69222 6×6ယာဉ်ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။အဆိုပါယာဉ်တွင်2K12Kubလေကြောင်းပစ်ဒုံး၏ခေတ်မှီစနစ်များကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။Missiles3ခုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးဆုံလည်မှာ360°လည်ပတ်နိုင်ပြီးဒုံးမြင့်တင်နိုင်မူမှာ+85°ထိဖြစ်သည်။ အဆင့်မြှင့်ထားသောKvadrat-Mတွင်ရွေ့လျားသောပစ်မှတ်များရှာဖွေသောစနစ်, Radar Proximity Fuse(ပစ်မှတ်အာရုံခံစနစ်)တို့ထည့်သွင်းထားပါသည်။လေယာဉ်များ,ရဟတ်ယာဉ်များ, မောင်းသူမဲ့(UAV)ယာဉ်များ,ခရုစ်ဒုံးကျည်များ, လေကြောင်းခြိမ်းခြောက်မူများကိုလည်းကောင်းမွန်စွာပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။Kvadrat-Mတွင်9M38M1(or)9M317E missilesများတပ်တင်ထားပြီးရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဖြစ်သောBuk-M1နှင့်Buk-M2တွင်လည်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။Kvadrat-Mသည်Bukကိုအဆင့်မြှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ‌9M38M1 missileသည်လေကြောင်းပစ်ဒုံးဖြစ်ပြီးထိရောက်သည့်အကွာအဝေးမှာ3.3ကီလိုမီတာမှ35ကီလိုမီတာထိဖြစ်ပါသည်။ကျည်ထိပ်ဖူး70ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောmissileကိုလည်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ 9M317 missileသည်Slant rangeမှာ45ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးအလျားလိုက်ထိရောက်သည့်အကွာအဝေးမှာ25ကီလိုမီတာဖြစ်ပါသည်။မတူညီတဲ့အချက်မှာ9M38M1၏တောင်ပံပိုင်းသည်9M317ထက်တိုနေပါသည်။ ‌MZKT-6922သည်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးမျိုးကွဲဖြစ်သောBuk-M2Eအပေါ်အခြေခံထားပါသည် Tor,Buk,Osa-1T,T38 9K33-1T လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တို့၏မျိုးကွဲဖြစ်ပါသည်။MZKT-6922သည်‌လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက်Tor-M2Eကိုအသုံးပြုပြီးလေကြောင်းပစ်မှတ်များ,ရဟတ်ယာဉ်များ,UAVများ,ခရုစ်ဒုံးကျည်များနှင့်smart bombsတို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ပါသည်။9M331လေကြောင်းပစ်ဒုံးသည်ဒေါင်လိုက်အမြင့်10ကီလိုမီတာထိတတ်ရောက်နိုင်ပြီးတစ်စက္ကန့်လျှင်1ကီလိုမီတာထိရောက်ရှိပါသည်။ ယခု ရေးသားထားသော ( မြန်မာ့တပ်မတော်တွင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် […]
ကြွက်ဘုရင် လို့ ခေါ်တဲ့ စု​ပေါင်းကြွက်​မြီးထုံးအုံ
ကြွက်ဘုရင် လို့ ခေါ်တဲ့ စု​ပေါင်းကြွက်​မြီးထုံးအုံ အဖြစ်​အပျက်​က ဒီလိုပါ။ 2005 ခုနှစ်​ ရဲ့ January လ … ​အေး​အေးခဲခဲ မနက်​ခင်း…. အက်​စ်​တိုးနီးယားနိုင်​ငံရဲ့ ​တောင်​ပိုင်း Saru ရွာမှာ လယ်​သမားကြီး Rein Kiiv နဲ့ သားဖြစ်​သူတို့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အထူးအဆန်းမြင်​ကွင်းအခု။ […]
ကယားပြည်နယ် NLD ပါတီဝင် အဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲဖြစ်မြောက်ရန် ဒေသခံများအား ငွေငါးထောင် ဆန်တစ်ပြည်ပေး စည်းရုံးခဲ့ရဟုဆို ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်ခရိုင်တွင် ကယားပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDပါတီ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ပါတီဝင်များအား ငွေကျပ်ငါးထောင်၊ ဆန်တစ်ပြည်နှင့် ဒဏ်ပေါက်ထုတ်များဝေပေးခဲ့ကြောင်း လွိုင်ကော်ခရိုင် လွိုင်လင်လေးမြို့ ပိန်းချစ် ကျေးရွာမှ […]
“ဗုဒ္ဓဝါဒ ဘဝကူးပုံ ဖတ်သင့်တာကိုဖတ်ထားမှ မှတ်သင့်တာကို မှတ်ခွင့်ရမှာပါ လောက၌ “အခက်ကြီး ၄ပါး” ရှိပါသည်။
“ဗုဒ္ဓဝါဒ ဘဝကူးပုံ ဖတ်သင့်တာကိုဖတ်ထားမှ မှတ်သင့်တာကို မှတ်ခွင့်ရမှာပါ လောက၌ “အခက်ကြီး ၄ပါး” ရှိပါသည်။ (၁)သစ္စာလေးပါးကို နားလည်အောင်ရှင်းပြရန် ခက်ပါသည်။ (၂)သင်္ခါရတရားများကို သတ္တဝါဟု ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့် သင်္ခါရတရားတို့၏ သတ္တသုညဖြစ်ပုံကိုသင်္ခါရတရားတို့ကို သတ္တဝါနှင့်စပ်၍ နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ ခက်ပါသည်။ (၃)တစ်ဘဝ စုတေ၍ နောင်ဘဝသို့ ရောက်ရှိခြင်းဆိုသော ဘဝနှစ်ခု […]
သတိထားစရာ ကွမ်းယာ အန္တရာယ်
ကွမ်းစားတဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ ထိုင်ဝမ်၊ ပြီးရင်ကျွန်မတို့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေရုံတင်မကပါဘူး။ စားသုံးတဲ့သူကိုပါ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာမှာ အဓိကအားဖြင့် ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး၊ ထုံးနဲ့ စားသုံးတဲ့သူပေါ်လိုက်ပြီး အခြားပစ္စည်းများပါဝင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကွမ်းသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အာရီကိုလိုင်း […]
« 1 … 903 904 905 … 934 »